YAAB: Shaxda England Ee Kulanka Germany Oo Qish Laga Helay, Laba Xiddig Oo Kusoo Bilaabanaya & Midkii Is-Muujiyay Oo Keydka Kululayn Doona - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaYAAB: Shaxda England Ee Kulanka Germany Oo Qish Laga Helay, Laba Xiddig Oo Kusoo Bilaabanaya & Midkii Is-Muujiyay Oo Keydka Kululayn Doona
YAAB: Shaxda England Ee Kulanka Germany Oo Qish Laga Helay, Laba Xiddig Oo Kusoo Bilaabanaya & Midkii Is-Muujiyay Oo Keydka Kululayn Doona
June 27, 2021 Apdihakem Omer Adam Wararka Ciyaaraha Maanta, Kulamada Caalamiga Ah 2
Waxa qish laga sii helay shaxda uu xulka qaranka England kaga hortagayo dhigiisa Germany kulanka wareega 16-ka ee EURO 2020 ka tirsan kaas oo Wembley Stadium ka dhacaya Salaasada.
Shaxdan ayaa sheegaysa in tababare Gareth Southgate uu laba bedel ku samayn doono shaxdiisii ciyaartii ugu dambaysay isaga oo laba da’yar ee Phil Foden iyo Mason Mount si wadajir ah ugu soo bilaabaya.
England oo ahaa kuwo qaab gaabis ah ku bilawday tartankan ayaa la ciyaaraya Germany oo uu loolan weyn oo kubaddeed ka dhaxeeyo iyadoo markii ugu dambaysay ee ay tartan ku kulmeen ay ahayd koobkii aduunka ee 2010 markaas oo Die Mannschaft ay 4-1 ku adkaadeen.
England ayaa ahaa xul weerar ahaan aan aad u madadaalo badnayn iyaga oo min 1-0 kaga soo adkaaday Croatia iyo Czech halka ay bar-bardhac 0-0 ah lasoo galeen Scotland.
Dhinaca kale xulka Germany ayaa qaab rafaad leh kaga soo baxay Group-kii dhimashada ee tartanka iyaga oo gool uu Leon Goretzka ka dhaliyay Hungary oo ay la bar-bareeyeen wareega 16-ka ugu soo gudbay.
Haatan wargeyska Daily Mail ayaa sheegaya in Foden oo ciyaartii ugu dambaysay keydka kusoo bilawday iyo Mount oo karantiin galay kaddib markii uu la kulmay Billy Gilmour oo caabuqa Korona laga helay ay kusoo wada bilaaban doonaan.
Waxa la filayaa in Bukayo Saka oo ahaa xiddigii ugu bandhiga fiicnaa kulankii Czech uu keydka ku bilaaban doono balse waxaan wali la hubin go’aanka uu Southgate ka gaadhayo Jack Grealish oo qudhiisu ah ciyaartoyga ay midkooda ugu fiican u arkaan jamaahiirta dalkaasi.
Laacibnet suaal an idin waydiiye xulkan ingiriiska mxaa somalida iska khuseeya marwalba egland baad nadaba wadaan teeda kale anuu xaqiiqada jirta markaan idiin sheego taagere man united ahbaad tihiin ee daacad hala ahaado
Omar, war ninyahow ma aragtay nimanka laacib qora malaha waxa uu fadhigoodu yahay England mise saxaafadaha ay wax kasoo tarjumaan ayaa kuwa ingiriiska ah. Maalin walba cayaarta england waa in war laga keenaa! Shaxdaa sidan ah, khabiir baa shaxda sheegay, khabiirkalaa Sidaa yidhi cayaaraha kalaa ka kulul oo xiiso badan engiriisku wax haba yaraatee uu meesha ku hayaa oon hadal ka ahayni ma joro idinkuna fadlan dadka ka dhaafa maalin walba xulka ingiriiska aad nagu wareeriseen. Hal koob ayay waligood qaadeen xulkan aad dadka xafidsiinaysaan.